Tsy misy avy amin’ny TIM sy ankolafy Ravalomanana mankany amin’izany governemanta izany hoy ny filoha Ravalomanana! – MyDago.com aime Madagascar
Tsy misy avy amin’ny TIM sy ankolafy Ravalomanana mankany amin’izany governemanta izany hoy ny filoha Ravalomanana!	Magro 14/03/2011
Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby teo amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka ny filoha Ravalomanana tamin’ity Alatsinainy 14 Martsa ity koa dia toy izao ny dikan-teny malalaka ny laha-teniny:
Vao miresaka mivantana aminareo aho dia faly satria tsapako fa misy olona tena mahatoky ary azo antoka tsy mba mivadimbadika amin’izay fitiava-kely na seza na fitiavam-bola toa anareo izao ka faly aho, misaotra anareo.
Manaraka izany dia efa nilaza aho tamin’ny « communiqué » zay natao fa tsy miditra amin’ny izay goveremanta tiany hantsangana eo isika satria tsotra dia tsotra fa tsy ny « paraphe » na rango-pohy no hahafahana managana governemanta fa fifanarahana tanteraka miaraka amin’ny atotan-taratasy vita sonia mazava tsara izay vao misy ny fiarahana miasa. Koa amin’izao fotoana izao dia tsy mbola mazava izany rehetra izany dia mbola mitohy ny dinika izay hataonay aty. Ary tena mifanakalo hevitra mihitsy izahay miaraka amin’ny manam-pahaizana manokana momba izany hoe « médiation » na fanelanelanana na fampihavanana fa tsy mitsara tsotra izao na « arbitrage ».
Manàna faharetana, matokia fa tsy hanaonao foana amin’io akory izahay aty. Matokia ary samia maharitra. Tsy ho ela dia hofantatrareo ny fivoriana hataonay aty.
Hanambara aminy vazan-tany fa tsy mety ary tsy tanterahana hatramin’farany ny dinika. Tsy maintsy vitaina io feuille de route. Tsy azo ataony manome fahefana mihoampampana ny mpitondra, izy daholo ny manendry ny PM, manendry ny CT sy ny CST, tsy mety izany.
Rehefa ho foanana, tsy ekena intsony ny fifanarahana Maputo sy Addis Abeba, dia izay nanao sonia ihany no manafoana izany, fa tsy am-bava ihany akory.Noho izany dia manan-tena isika fa ny SADC, miaraka amin’ny Union Africaine, ary ny Union Europeen ary ny Amerikana dia samy hanaiky fa tsy rango-pohy dia hahafoana ireny rehetra ireny.
Milaza aminareo vahoaka aho mba tsy ho voan’ireny tsaho sy lainga afafy ireny fa mitondra ny vahoaka Malagasy amin’ny fisavorovoroana izany.Aza matahotra fa tsy hanao sonia mihitsy raha tsy mazava tsara ny “feuille de route” . Ireo izay milaza, fa avy aminy TIM na “mouvance” dia diso izany, fa mandeha amin’ny anaran’ny tenany samy irery izy ireny.
Raha misy milaza fa maro an’isa, dia ny vahoaka malagasy no maro an’isa, ianareo izao no maro an’isa.
Milaza mazava fa tsy mbola tanteraka ary tsy mahafapo ny antoko politika ny feuille de route hamoahana amin’ny fahasahiranana, ka ny ankolafy Ravalomanana dia tsy miditra velively amin’ny governemanta nantsangana, raha misy misolantsolana mitonona fa avy amin’ny Tim na ankolafy Ravalomanana dia tsy izy intsony avy eo
Ireo izay diso lalana dia miverena dieny izao.
Ingahy Simao niala tany nilaza fa hihaona tamin’ny ankolafy Ravalomanana, Aza manaiky hofahanan’ny olona lainga.Izao no hafatra :
Tsy misy avy amin’ny TIM sy ankolafy Ravalomanana mankany amin’izany governemanta izany.Manda izany tanteraka isika.Eto Afrika atsimo isika dia hoany Zambia (Troika, Sudaf, Mozambika), avy eo hoany Botswana (SADC), Namibia (pdt SADC), aza matahotra fa hainay ity.
Tsy afaka mametraka governemanta mihitsy raha tsy mahazo tso-drano avy amin’ny UA.
Tsy misy trève izany intsony ! Ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana Tsy misy mahasolo ny sonian’i filoha Ravalomanana ! Auteur Solo RazafyPublié le 14 mars 201115 mars 2011Catégories Politique	7 pensées sur “Tsy misy avy amin’ny TIM sy ankolafy Ravalomanana mankany amin’izany governemanta izany hoy ny filoha Ravalomanana!”	Ziry Onésime dit :	15 mars 2011 à 5 h 48 min	Misaotra betsala Atoa Filoha nanome fanazavana matotra a!.. Tena ilaina tokoa izany amin’ny afitsok’ireo mpamadika tanindrazana ireo!
Ny anay dia tsotra Tompoko: manohana anao hatramin’ny farany izahay, ary tsy hivadi-bela mihitsy!
Araka ny teninao, dia tsy maintsy misy masoandro mipotsaka avy any atsinanana, fa tsy hipotsaka velively any andrefana izany izy,…. raha tsy hoe angaha maniry nify ny akoho!
LAZALAZAO dit :	15 mars 2011 à 18 h 52 min	Manome toky ny filoha Marc RAVALOMANANA ny MA.MI.FI, GTT Chine,ny GTT Phillipines, ny GTT international GE, ny FRDL, ny fikambana KA SAHIA, ny ary nt ANKOLAFY TELO fa mbola mihaino sy manaraka tsara antsakany sy an-davany ny baikon’ny filoha Marc RAVALOMANANA.
Ny Riana Vona dit :	17 mars 2011 à 15 h 59 min	Isaorana be dia be ny Filoha Ravalomanana nanome amin’ny antsipiriany ny fizotry ny famahana ny krizy. Ilaina dia ilaina tokoa, indrindra amin’izao mampamahofaho ny sain’ny Malagasy izao no manome fanazavana hentitra sy mafonja ohatra an’ireny. Mila miara-mientana daholo isika rehetra tonga saina fa any amin’ny lalana tsy izy zao itondran’izao fitondrana eo zao dia mila mafanohana satria tena marina tokoa fa mila faharetana ity raharaha ity fa tsy azo atao maimaika satria mila fongorina tanteraka ny toetsaina mambotry firenena toy ny fitiavam-bola, fitadiavan-tseza ary ny fitadiavana tombontsoa manokana fa tsy ho an’ny vahoaka.
Mbola mankahery antsika rehetra maharitra amin’ny tolona.
Ny Riana Vona dit :	17 mars 2011 à 16 h 06 min	Tanora ny tena, ary amin’ny saina tsy miangatra ary mifoha tsara no itenenako fa tsy mbola misy filoha manam-pahendrena sy mahatsinjo lavitra ohatra ny filoha Ravalomanana. Ny tortra ilain’ny olona tokony ho Filoha mantsy dia ny fananana ny maha izy azy, matotra ary manana vision lavitra be. Ny ankamaroan’ny olona manao politika eto amintsika dia tsy mahatsinjo afatsy ny androany sy ny rahampitso ary ny eo ambany orony. Raha noana izy androany dia mitady hevitra hihinanana androany sy rahampitso fa tsy mitady ny hihinanana maharitra ary mahasoa sy mahasalama. Zany no mahatonga ny olona mandroba sy mangalatra. Hevitry ny olona kamo hiasa zany.
GBD dit :	17 mars 2011 à 16 h 57 min	misaotra tompoko nanazava.
peuples Malgaches dit :	16 août 2011 à 14 h 41 min	Rehefa tsy zaka ny rongony ravalonandra dia ajanony ah! inona daolo ireo Tim ao anaty governemanta ireo? sa mitsentsina inona ny masonao?
HoAiza dit :	16 août 2011 à 16 h 50 min	odosy e (bis)
Précédent Article précédent : Video – Manoela, Magro 14/03/2011Suivant Article suivant : Un coup d’état reste un coup d’état !